Fikradda naqshadaynta ee 24-da ee ugu wanaagsan Sigaarka iyo Ragga - Fikradaha Fikradaha Madadaalo
Fikradda naqshadaynta ee 24-da ee ugu wanaagsan ee loogu talagalay ragga iyo dumarka
Ma aragtay dad leh nooca tattoo ah? Sanadihii la soo dhaafay, dad badan oo ku cusub ganacsiga tattoo ayaa waxay ka walaacsan yihiin muujinta nashqadahooda. Maanta, waxaan arki karnaa kumanaan dad ah oo si geesinimo leh ugu soo baxaya naqshado tafaasiil oo aan caadi ahayn.
1. Egyihiin eeyga gacanta
2. Dharka garabka ee garabka
Sababta korodhka qaababka tattoo loo yaqaan "# tattoo design" waa sababtoo ah awoodda hal-abuurka ah ee kuwa caqligal ah. Ma caawin kartid laakiin waad jeceshahay.
3. Tattoo dogd cute
Dad badan oo badan, helitaanka eeyga #tattoo waxay noqotey hab muujinaya waxay aaminsan yihiin ama rabaan inay gaaraan. Marka ay helaan tattoo eyga, waxay xusuusineysaa in ay ku guuleysteen ama ku saabsanaan lahaayeen si ay wax u gaaraan. Miyaadan u malaynaynin?
4. Talaashka dogabka
Waxaan aragnay dadka ka qoomamaya inay helaan tattoo maxaa yeelay iyaga oo aan diyaarin ka hor intay rabaan. Si kastaba ha noqotee, tattoo dogbka marwalba wuxuu noqonayaa wax aad jeceshahay.
5. Tattoo eyga sexy
Waxaa jira fursado badan oo lagu heli karo tattoos fiican. Mudanayaalku hadda waxay jecel yihiin tafaasiisha eyda jinsiga ah ee laga yaabo inay yeelan karaan shinni ka dib xayawaankooda.
6. Tartoo garaashka aragga
Tegoolada suunka ee gacanta ayaa kaliya lagu riyaaqi karaa oo jeclaan lahaa wax badan haddii aad ka fekereyso inaad wax aad u weyn u hesho.
7. Taraawada eyga xayawaanka ah
Waxaa jira siyaabo fara badan oo lagu caddeeyo inaad jeceshahay eygaaga xayawaankaaga ah iyo tan ayadoo lagu dhejinayo xayawaanka xayawaanka guryaha xayawaanka lugahaaga.
Tattoos eyga oo jecel sida tan waa qabow. Haddii aad aragto qof leh nooca nooca tattoo, waxaad hubaal tahay inaad jeceshahay.
9. Dharka garabka ee garabka
Tiknoolajiyada loo isticmaalo in la helo taantada eyga ee eygada ah ee haweenku waa mid cajiib ah. Marwalba marwalba way jecel yihiin nooca tattoo.
10. Tattoo ey dhiska
Markaad raadineyso tattoos eey qurux badan adoo ah gabadh ama nin, hubso inaad shaqo ka heshay tattooist khibrad leh oo kaa caawin kara inaad shaqo hesho.
11. Tattoo eyga qabta
Maqaarka cagaaran iyo kuwa buluugga ah waxaa loo isticmaali karaa tattoo eygaaga. Waxaa jira siyaabo badan oo aad naftaada u heli kartid tattoo ah eeyo macaan oo habkastaba waa mid cajiib ah.
12. Tattoo dogd cute
Tegood eyga cidhiidhiga ah ee dadka ayaa aad u quruxsan oo ay kugu adkaan karto inaad hesho sabab kasta oo aadan ubaahnayn in lagu qabto gacantaada.
13. Tafaftirida eyga oo jecel
Haddii aad ka fekereyso helitaanka tattoo, waa inaad qaadatid wakhti si aad u xaqiijiso inaad haysato tattoo eyga ugu fiican. Boogta ayaa noqon karta meesha ugu fiican ee aad ka heli karto tattoo-gaaga.
14. Tullow dogmat bull
Taraashka dogobka bullaashu wuxuu noqdaa waxa qof walba jeclaan lahaa inuu helo sababtoo ah quruxda ku xiran. Waxaa jira siyaabo fara badan oo aad adigu u habeyn kartid tameeyaha dogabka. Isticmaalka tattoo waa heerka xiga ee helitaanka sawirka. Sababta aad u aragto qaar ka mid ah # majiraan iyo jecel yihiin sababtoo ah sida loo qaabeeyay.
15. Tattoo eyga midabka leh
Adiga ayaa ah inaad go'aan ka gaartid nooca sawir-maskaxda ee aad u baahan tahay. Marka ay timaado qaadashada tattoo eyga, waa inaad isku daydaa inaad sameysid cilmi-baaristaada kahor kahor tashadaan eyda midabka leh.
16. Tattoo ey dheddig ah
Ma aha oo kaliya qolka tattoo-yada ah in aad noqotid ka dib markii aad raadineyso tattoo eyga dhedigga ah. Farshaxanku had iyo goor waa waxa ugu horreeya ee aad ka taxadirto. Sida gabadha, waxaad u baahan tahay oo keliya tattoo eyga dhedigga wanaagsan.
17. Tattoo dogob back
Haddii xarun aan si fiican loo dhigin oo raaxo leh, helitaanka dhabarka saxda ah ee loo yaqaan 'dog dog tape' waxaa laga yaabaa inuu noqdo khibrad aad u xun. Tani waa sababta ay dadku marwalba u weydiinayaan nooc ka mid ah qolalka quruxda badan ee ay doonayaan inay jecel yihiin dumarka.
18. Sawirta dhabta ah ee dogka
Farshaxan yaqaana qaabka sawir-qaadashada dhabta ah waa mid muhiim u ah tattoo. Haddii farshaxankaagu aanu fiicneyn ama xirfad lahayn, way adkaan kartaa in la helo tattoo this.
19. Tattoo eey uurka
Waxaa jira farshaxan farabadan oo online ah si aad u kala doorto marka ay timaado qaadashada tattoo dogabka. Habka ugu wanaagsan ee lagu helayo farshaxan wanaagsan waa in la weydiiyo su'aalo. Onlineka ayaa kuu suurogeliyay inaad ku soo koobto farshaxanka ugu fiican ee aad tahay gabadha.
20. Tattoo eyga qabow
Markaad hesho farshaxan, waxa soo socda waxaad ka fekereysaa meeleynta tattoo eygaaga. Meeleynta tattoo eyga waa mid muhiim ah. Haddii aad leedahay meeleynta qaldan ee tattoo, waxaa kugu adkaan karta inaad leedahay tattoo cajiib ah.
21. Tartanka xayawaanka eeyaha
Fiiri suugaan tiyaarka ah ee eeyga caqligal ah iyo arag sida aad u hagaajin kartid naftaada. Naqshadeynta tattoo ee eygaaga waa wax aad u baahan tahay inaad ka fikirto marka hore kahor intaanad helin. Markaad leedahay qaabkan, waxay kuu sahlanaan lahayd inaad heshid naqshad noocan ah.
22. Tartanka eyga oo yaab leh
23. Talaashka dogabka
24. Seddex Sawir oo Lagu Sameeyo Naqshad Naqshad
jimicsiga bisadahaTattoo infinitytattoo tilmaansawirada malaa'igtaarrow Tattootattoos qosol lehku dhaji tattoostattoos gacantaTartoo ubax badantattoos qorraxdalammaanahawaxay jecel yihiin tattoosshimbir shimbirlaabto laabtacalaamadaha calaamadaha ayaa calaamad u ahfikradaha tattootattoos iskutallaabtalibto libaaxtattoo ah octopusTattoos Wadnahakoi kalluunkatattoosJoomatari Tattoossawirada gabdhahaTilmaamta jaalaha ahDhaqdhaqaaqatattoos sleevesawir gacmeedtattoos saaxiib saxa ahhenna tattootattoos moontaraagada kubbaddatattoos qabaa'ilkatattoos taajkiitattoos eagletattoo maroodigashaatiinka shiidanwaxaa la dhajiyay tattoostattoo indhahatattoo biyo ahgaraacista gacmahatattoos ubaxTattoo Feathergadaal u laabomuusikada muusikadatattoos qoortatattoo dheemantattoos cagtasawirrada ragganaqshadeynta mehndi